Bara 2018'tti bilbilli tokko tokko 'WhatsApp' nama hinfayyadamsiisan - BBC News Afaan Oromoo
Bara 2018'tti bilbilli tokko tokko 'WhatsApp' nama hinfayyadamsiisan
Kan bilbila harkaa dulloomaa qabattan taate sirni itti fayyadamaa jirtan ilaaluu qabdu. Sababiinsaa bara 2018 irraa kaasee 'WhatsApp' fayyadamuu danda'u dhiistu ta'a.
Tajaajilli ergaatiin akka addunyaatti adda duree kan ta'e kun Amajji 1 irraa kaasee bilbila arkaa irratti tajaajila kennuu dhaabuuf jira; sababiin isaas ulaawwan kunneen akka hojjetan waan hin deggerreef akka hojii ala ta'an taasisa.
Akka fuula marsariitii isaatti, sistemoonni bara haarawaa irraa kaasee hojjechuu hin dandeenye kun warra bilbiloota 'BlackBerry OS 10' akkasumas 'Windows Phone 8.0' irratti hojjetanidha.
"Bilbiloonni kunneen qaama seenaa keenyaa ta'anillee, ga'umsa ittiin tajaajila isaan kennuu danda'an ballisuun appilikeeshiniin keenya gara fuula duraatti tajaajila hin kennine taasisu," ibsameera.
Bilbiloonni kunneen tarree warraa 'WhatsApp' kanaan booda irratti hin hojjennee: siisteema 'Android' 2.3.3 dura, 'Windows Phone 7', 'iPhone iOS 3GS / iOS 6' akkasumas 'Nokia Symbian S60' tti dabalamu.
Kampaaniin kun sisteemota meeshaaleen biroo warra akka 'Nokia S40', ykn 'Android 2.3.7' deggeran hojjechuu akka dhaabu akeekkachiiseera.
Kana jechuun, yeroo muraasaaf itti fufuun ergaa erguufi fudhachuuf dandeessullee, yeroo booda tajaajilli isaan kennan haaromfamuu hin danda'u.
Fakkeenyaaf, bilbiloonni kun yoo app. duraan gayyaafatte/buufatte hin qabdu ta'e maqaa haarawaa baafachuu ykn kan duraan qabdullee haaromfachuu hin dandeessu.
Kampaniichi namoonni akka bilbiloota moodelii haarawaa siisteema 'Android 4.0' ykn isaa ol, 'Windows Phone 8.1' ykn isaa ol, ykn 'iPhone' kan 'iOS 7' qabu ykn isaa ol bitatan jajjabeessa.
Akka raga kampaanichaatti hanga ar'aatti namoota 'WhatsApp' sirriitti itti fayyadaman miliyoona 1,000 ta'anitu jiru. Akka raga bara kana Guraandhala keessa walitti qabametti, shakkii tokko malee tajaajila ergaa gabaabaatiin adda durummaan beekamadha. Haata'umalee, kan biroon warri akka 'Telegram' fi 'Snapchat' tajaajila walfakkatu kan kennan jiraatanillee tokkoyyu fayyadamtoota miliyoona 1,000 hin caalan.
Kanaaf, yeroo hedduu'WhatsApp' appilikeeshinii haarawaa meeshaawwan dulloomoo hojii ala taasisu dhiyeessa.
"Yeroo tokko tokko akka namoonni walii walii isaanii gidduutti sirnaan walqunnaman taasisuuf murteewwan rakkisoo fudhannu jiraatanillee bilbiloota namoonni garri caalan fayyadaman irratti hojjechuu barbaanna," jechuun ibsan.
UK'n ministirri muummee haaraan dhuma Adoolessaa filatti
Feesbuukiin fayyadamtoota biliyooona sadii uggure
Dargaggeessa bidiruu akka biskileetiitti hojjate
US Juuliyaan Asaanji irratti himata haaraa bante
Yugaandaan ijoollee daandiirraaf maallaqa kennuu dhorkite
Huawei'n qaama waliigaltee daldalaa ta'uu danda'a jedhan Tiraamp